भाग्य चम्किएपछि दुबईमा ११ करोडको चिट्ठा जिते ! – ABC NEWS 24
काठमाडौं । सधैं कर्म गरेर फल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा सत्य नहुन पनि सक्छ । किनकी जब कसैको भाग्य चम्किन्छ तब फल प्राप्तीका लागि कसैले रोक्नपनि सक्दैन । एक भारतीयलाई तिहार अघि भाग्यले ठूलो साथ दिएको छ । दुबईमा ३३ वर्षीय सुनील कुमार कथुरियाले करोडौंको चिट्ठा जितेका छन् । यसमा उनले ११ करोड भन्दा धेरै नेपाली रुपैंयाँ पुरस्कार जितेका हुन ।कठुरिया मानमाको एक निजी कम्पनीमा काम गर्छन् । उनी एक एक विक्रेता अर्थात सेल्सम्यान हुन् । १० लाख अमेरिकी डलर पाउने उनी ३४२ औं व्यक्ति हुन् । सुनीलले यो चिठ्ठा टिकट १७ अक्टुबरमा अनलाइनमार्फत किनेका थिए ।तपाईंलाई पनि जित्ने मन छ भनी तल क्लिक गर्नुहोला
चिट्ठा परेको जानकारी आएपछि सुनिल चकित भएका छन् । सोचेको थिएन की चिट्ठा मलाई नै पर्छ । तर मेरो भाग्य जग्मगाएको रहेछ । म धेरै खुशी भएको छु । यो रकम म मेरो घर बनाउँन खर्च गर्नेछु । भाग्यबाट फल मिलेकाले उनै भगवानको कृपा हो । यसैले भगवान खुशी बनाउँन केही दानपनि गर्नेछु ।तपाईंलाई पनि जित्ने मन छ भनी तल क्लिक गर्नुहोला
← मिस पिंक २०१८ बिजेताले नागरिकता बनाउन नै ५-६ लाख खर्च गरिन कारण एस्तो
कोरोना संक्रमितहरुको उपचारका लागि ओली सरकारले बल्ल सुरु गर्यो यस्तो सेवा, क-कसले लिन पाउछन ? →